Maalinta Hooyada Farxada Leh! | Martech Zone
Maalinta Hooyada waa maalinta 3-aad ee ugu weyn ee fasaxa tafaariiqda iyadoo in ka badan $ 22.3 bilyan lagu bixiyay Mareykanka oo keliya. 35.5% dadka Mareykanku waxay iibsadaan dahabka Maalinta Hooyada, oo ah 6.8% koror sanadle ah sanadkii. Xaqiiqdii, guud ahaan qarashgareynta hadiyadaha Maalinta Hooyada waxaa lafilayaa inay kordhaan 10.5% sanadki.
Weligaa la yaab ma leh sababta Maalinta Hooyada ay uga caansan tahay Maalinta Aabbaha? Ma ogtahay in Maalinta Hooyada ay ahayd maalin fasax qaran in ka badan nus qarni dheer? Miyaad rumaysan lahayd hadaan kuu sheegno inay waligoodba jireen hooyooyinka aabbayaashu ka badan yihiin? Hagaag, cadaymaha ayaa macno ahaan loogu qoray DNA-dayada. Abaalmarinta Abaalmarinta
Waa kuwan infographic cajiib ah oo tilmaamaya qaar ka mid ah taariikhda Maalinta Hooyada iyo isbeddelada ku yimid kharashka macaamiisha ee fasaxan muhiimka ah. Midda kale, midkeen innaba halkaan ma joogo haddii aysan jirin wax la mid ah hooyo! Maalinta Hooyada Farxada Leh!
Tags: fasaxyadainfographichooyooyinka maalintii